ဒူဘိုင်းအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှု - ညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု🥇
ယခုကြှနျုပျတို့စုဆောင်းမှုများမှာ - ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ရရှိနိုင်ဂျော့ဘ်! 🥇
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at ဒီဇင်ဘာလတွင် 10, 2017
ဒူဘိုင်းဂျော့ - ဒူဘိုင်းအတွက်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရေးအေဂျင်စီများ
ဒူဘိုင်းအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့် The အရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်ဖြစ်လာ အာရှအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက်စူပါယှဉ်ပြိုင်။ အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှာဖွေနေဘယ်မှာ အိပ်မက်အလုပ်နေရာလွတ်ဘို့ နှင့်လာပြီ အင်ဒီးယန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များ။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာလူတွေကူညီပေးနေစတင်သည်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထား, ငါတို့ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ CV ကိုစောင့်ဆိုင်းနှင့်အသငျသညျလိမ့်မည်ကတည်းကဒါဟာခဏတစ်ယူစေခြင်းငှါ, ယူအေအီးအတွက်အသစ်တခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်မြေယာ။ သို့သော်အရေးကြီးသောသင်တို့အဘို့နားလည်သဘောပေါက်ရန် သင်သည်သင်၏အိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေချင်တယ်ဆိုရင် နှင့်သင့်စံပြအခန်းကဏ္ဍ secure ။ သငျသညျဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်လည်းအစိုးရကုမ္ပဏီများသည်ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများသည်သုတေသနစတင်သင့်ပါတယ်။
မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီ၌ရှိသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပလီကေးရှင်း 80 ကျော်% အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ HR မန်နေဂျာများအနေဖြင့်ထုတ်ဝေမှုကိုအငြင်းရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ဒီအတွက်ကြောင့်, သငျသညျအလုပ်ရှာဖွေ၏ရှည်ကာလအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ် အထိ 8 လကြာ။ သူတို့အခွအေနမြေိုးကိုသင်တစ်ခုချင်းစီအတွက်လှုပ်ရှားမှုရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ် သငျသညျစုဆောင်းဖို့ပေးပို့လျှောက်လွှာ။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်သင်သည်တလျှောက်လာရန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းများအတွက်စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်အဖြစ်။ တဖန်သင်တို့နောက်ဆုံးတော့လိမ့်မည် ယူအေအီးအတွက်ကောင်းစွာ-paid နှင့်အခွန်လွတ်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရ။ သင်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိရလိမ့်မယ်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ကြိုးစားပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် သငျသညျအလုပ်အကိုင်အမဲလိုက်လုပ်ပေးသည့်အခါလှုံ့ဆော်စောင့်ရှောက်ခြင်း ခက်အဘယ်သူမျှမမေးဖြစ်ပါတယ်။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းအပြုသဘောဆောင်နှင့်ယုံကြည်မှု mode ကိုကျရှုံးစတင်ပါလိမ့်မယ်သင်မူကားအလွန်အားကောင်းတဲ့ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်သင့်ဇာတ်ကောင်စီစဉ် အလုပ်တစ်ခုအမဲလိုက်ခြင်းစဉ်အတွင်းခံနိုင်ရည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်လက်ရှိ၌စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာပါလိမ့်မယ်အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်လျှင် ရုံယူအေအီး၌အသက်ရှင်ရန်သင်တစ်ဦးကံဇာတာကုန်ကျ။ ရေရှည်မှာမှာတော့ညာဘက်အရှိန်အဟုန်ဆက်ပြီးနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လှုံ့ဆော်စောင့်ရှောက်ခြင်းလုံးဝလိုအပ်ပေသည်။ သင်တို့အဘို့အအောင်မြင်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်လာတာပေါ့အထူးသဖြင့်လျှင် ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များ wWhatsAppgroup link ကို.
ဒူဘိုင်းအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှု - သင်ရှာနေကဘာလဲ?။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းယနေ့ Upload လုပ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျမြားကိုလညျးကုမ္ပဏီများမှငှားရမ်းဖို့ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက် Careerjet ယခုငှားရမ်း နှင့် ပင်လယ်ကွေ့ငှားရမ်းက်ဘ်ဆိုက်အတွင်း Monster။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ထိပ်တန်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုမှလူကြီးမင်း၏ CV ကို Send
အရှုံးမပေးနဲ့နေ့တိုင်းပေးပို့ဘယ်တော့မှမ စုဆောင်းဖို့သင့် CV နှင့် HR မန်နေဂျာများ။ အကြိမ်အနည်းငယ်တစ်လပဲသူတို့ကိုပြသနိုင်ဖို့တောင်မှများအတွက် သင်တစ်ဦးအလုပ်ဘယ်လောက်ဆိုးချင်ကြဘူး။ ဒီ OK ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်အခြိနျမှနျမှဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်းအနည်းငယ်အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုရှိသည်နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့မှလူကြီးမင်း၏ CV ကို re-ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, စော်ဘွားအတွက်ရှာဖွေသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်လှုံ့ဆျောမှု အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ နယူးကျွမ်းကျင်သူများကိုလည်းကြည့်ရှိသင့် ယူအေအီးအလုပ် WhatsApp ကိုအုပျစု link ကို။ ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုကြည့်ရှုဖို့ကျိုးနပ်သည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်စုဆောင်းဖို့ CV ကိုပေးပို့ခြင်းအရေးကြီးပါသည်။ သို့သော် ပို. ပင်အရေးကြီးသောရန်ဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအုပျစု link ကို join။ ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်ပါကစ္စတန်, အိန္ဒိယ, ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်တောင်အာဖရိကကနေအသစ်အကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေနေကြသည်။ ကြောင်းရှာဖွေစုဆောင်း၏ထိပ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများကဲ့သို့ပင်အပြောင်းအလဲယူအေအီးအတွက်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြသူအထူးသဖြင့်တချိန်က။
ဥပမာအားဖြင့်, လူသစ်ပင်လယ်ကွေ့အားလုံးကိုကျော်ရှာဖွေနေ အင်ဒီးယန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များ။ နိုင်ငံတကာကစားသမားဘရှာဖွေနေသူဘို့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေအများကြီးရှိသေး၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘို့ နေရာချခံရဖို့ရှာဖွေနေကြသူအသစ်များကိုကျွမ်းကျင်သူများ ယူအေအီး၌တည်၏။ ယူအေအီးအတွက်အမှုဆောင်အရာရှိရောက်ရှိရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏်ထမ်းခေါ်ယူမှု ဒူဘိုင်းကောင်းစွာအားလုံးအရှေ့အလယ်ပိုင်းကျော်လူသိများသည်.
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, သင်ကာတာနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့စစ်တိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေနေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလွယ်ကူသည်။ သူတို့အခွအေနမြေိုးကိုသင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့အလုပ်အမဲလိုက်ခြင်းပေါ်တွင်သင်၏အာရုံဆုံးရှုံးနိုငျသောကွောငျ့သငျသညျအောင်မြင်ရန်ကြိုးစားနေသောအရာကိုဘယ်တော့မှမေ့။ အမြဲ စော်ဘွားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွင်းရှာဖွေရေး ဈေးကွက်ကိုတိုးပွါးစေ ဒူဘိုင်းရှိအန္တိမပန်းတိုင်အဘို့သင့်အခွင့်အလမ်းတွေကို။ ဤအကြောင်းကြောင့်, အခါတိုင်းသင်တို့ဆီသို့ CV ကိုပေးပို့ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီ အင်တာဗျူး၌သင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြောသည်ကိုမြင်ယောင်ရန်ကြိုးစားကြောင့်အောင်မြင်ရန်။ စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများကိုသင်ခေါ်ဆိုခြင်း start သည့်အခါသင်သိဘယ်တော့မှကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်သင်အခါတိုင်းစကားပြော headhunters နှင့်အတူစကားပြော။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း, သင်ဤမျှလောက်လက်တွေ့သင်လုပ်ချင်တယ်အဘယ်သို့သောအကြောင်းရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအသက်တာ၏သင်၏နောက် 10-20 နှစ်များတွင်အောင်မြင်ရန်။ သင်သည်ထိုကုမ္ပဏီအတွင်းအနာဂတ်၌ဖြစ်ချင်ရှိရာအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။
ကျိန်းသေတိုးချဲ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲ ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလုပ်အောင်မြင်မှုကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတော့သူကမြင့်မားတဲ့ရည်ရွယ်ထားမှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ရှာဖွေသူခရီးသုတေသနပြုကြောင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနားလည်ရန်လိုအပ်တိုင်းအလုပ်သင်တစ်ဦးနာကျင်လူတစ်ဦးအောင်နှငျ့သငျဖို့လိုအပျ ထိုပြည်၌သင်တို့သည်မရခိုင်မာတဲ့ဆက်သွယ်မှုထူထောင်ရန်။ ကံမကောင်းစွာပဲအဆိုပါကျွမ်းကျင်သူများ၏အနုတ်လက္ခဏာဘက်အနည်းငယ်အပေါ်တဦးတည်း၌သင်တို့၏အဆုံးစွန်သောပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါလိမ့်မပြုစေခြင်းငှါ ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီမှအလုပ်-အမဲလိုက်ခရီးသွား.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအမြန်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းလွှတ်တင်ခြင်းထောက်ပြသင်တို့အဘို့အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျသိသိသာသာဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီမှကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပေးပို့လိုက်တဲ့အခါ စော်ဘွားအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်ကြော်ငြာများအတွက်မြင့်မားသောအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖွင့်ဆွဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖော်ပြသင့်ရဲ့စံပြအနေအထားကိုရှာသင်ရှာနေတာကိုအာရုံစိုက်ကူညီပေးသည်။ ဒူဘိုင်းအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု နှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအလုပ်အကိုင်ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဖြစ်ပါသည်.
အထူးသဖြင့်အခါသင် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်မြေယာ။ သင်လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေ, ဒူဘိုင်းနှင့်သင်တန်း၏ဗီဇာအတူပါလာကြပါပြီ။ သစ်တစ်ခု CV ကိုသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော Gmail အကောင့်ဖန်တီးအဖြစ်ရိုးရှင်းခြေလှမ်းများချဲ့သို့မဟုတ်သင့် CV ကိုမှယူအေအီးဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်သွင်း။ ကျိန်းသေတတျနိုငျသ သငျသညျအခြေခံအလုပ်အခွင့်အလမ်းဖမ်းပြီးကူညီ။ ၏သင်တန်းဖွင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်း၌သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာ update လုပ်ဖို့။ ကျနော်တို့ကအပေါ်အသေးစိတ်ရှင်းပြနိုင်ပေမယ်ကိုအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီဖြစ်စေပြုမိနိုင် ဒူဘိုင်းအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်တန်းမှတဆင့် သို့မဟုတ်အဘူဒါဘီ။
သို့မဟုတ်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုရုံ 2-4 ရက်သတ္တပတ်တွေ့ကြုံခံစားဖို့အခမဲ့အလုပ်လုပ်ထိုကဲ့သို့သော။ ထိုအနှေးနှင့်အမြန်သင်အရမ်းလေးစားမိပါတယ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, သင်ယုံကြည်စိတ်ချနှင့်နိုင်ပါတယ် လူတစ်ဦးတစ်အိပ်မက်အလုပ်ရရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။ ဒီလက်ငင်းမှာ, ယူအေအီးတှငျနထေိုငျသူတစ်ဦးဆရာသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်၏စစ်မှန်သောအကူအညီအကြိုးခံစားခှငျ့မြားကိုလညျးမယုံနိုင်လောက်အောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးကာလအတွင်းအထောက်အကူလက်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းအတွက်နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်ဒူဘိုင်းအတွက်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများအပျေါမှာအလုပ်ရှာဖွေရေးဖြစ်ပါတယ်။ သင်သောသူသည်ကိုယ့်တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားသောအခါ point မကြာခဏသတိမမူဖြစ်ပါသည် အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေ။ သို့သော်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သင်အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းဖို့အများကြီးတုံ့ပြန်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းခံစားရရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ တောင်မှသင်သည်အစဉ်မပြတ်မတူညီသောလိုင်းများမှကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပေးပို့ခြင်းလျှင်။ 2018 အတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်သငျသညျပိုပြီးတီထွင်ဖန်တီးမှုလိုအပ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ပင်မြူးပြန်လည်စတင်။
စိတ်ထဲ၌ဤအတူ ဒူဘိုင်းကူးလာကြသူကျွမ်းကျင်သူများ။ ကံမကောင်းစွာပဲအဲဒီလန်းဆန်းစောင့်ရှောက် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အ site ကိုသို့မဟုတ်အလုပ်ပေါ်တယ်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်တစ်ဦးစမတ်စိတ်ကူးမဟုတ်ပါဘူးအသစ်သောအခွင့်အလမ်းတွေအဘို့အတက်ဘ်ဆိုက်ကျော်အလုပ်ရှာဖွေနေ။ ငှားရမ်းမန်နေဂျာတစ်ဦးတစ်နေ့လျှင် 2,000 အလုပ်အကိုင်အလျှောက်လွှာအထိ 5,000 ကျော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်လက်ခံရရှိကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့သိသိသာသာအရေးကြီးသော။
ဖို့ကြိုးစားမနေပါနဲ့ သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးများအတွက်အခွင့်အလမ်းတိုးချဲ့ နှင့်နိုင်ငံတကာအရင်းအမြစ်များမှဆောင်ဖြစ်လေသည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်များစွာသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်အတူအလုံအလောက်တင်းကျပ်မရှိကြပေ။ အတူတူမှတ်စုစာအုပ်အနည်းဆုံး 3-50 အသစ်သောကုမ္ပဏီများစာရင်းကိုဖန်တီးပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, တိုက်ရိုက် LinkedIn အပေါ်ဒါရိုက်တာနှင့်အတူချိတ်ဆက်၌သူတို့ကိုချဉ်းကပ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်ဖို့လိုအပ် အလွန်လေးနက်သောသင်၏အလုပ်ရှာဖွေရေးယူ။ စာရင်းတစ်ခု ဖန်တီး. တစ်ဦးချင်းစီရက်သတ္တပတ်၏အစအဦးမှာ CV ကိုပေးပို့ခြင်းကိုစတင်ပါ။ အခါတိုင်းသင်တစ်ဦး CV ကိုအပ်လုဒ်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်အစီအစဉ်အလုပ်အကိုင်အလျှောက်လွှာချောင်းကိုပေးပို့ခြင်း။ ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်အလျှောက်လွှာနှင့်အတူဖန်တီးမှုတစ်ခုမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည် အလုပ်တစ်ခုရဖို့အဓိကသော့ချက်။ အားလုံးသင်ဖြည့်စွက်အခါတိုင်းသစ်ကိုတတ်နိုင်သမျှအတှေ့အကွုံကိုထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားပြီးနောက် အထူးသဖြင့် WhatsApp ကိုအပေါ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလျှောက်လွှာ.
ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့? လူမှုရေး profile များကို Get
ထို့အပြင်တိုင်း အသစ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုး ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသုံးပါနှင့် ASAP လူမှုရေးအရသင့်ပါတယ်။ ဒီလူမှုရေး profile များကိုအဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ စုဆောင်းမှုဒေတာ။ သငျသညျကို up-to-date ဖြစ်အောင်အတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့လိုအပ်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တစ် LinkedIn တို့ 2018 နှင့်အတူစတင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးရှိတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ အဆက်အသွယ်အရေအတွက်ကို gulf အလုပ်အကိုင်များများအတွက် WhatsApp ကိုအပေါ် updated ထို့အပြင်သင့်ရဲ့ဇီဝနှင့်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအသေးစိတ်ကိုအညီသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မှဖန်တီးခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်, သင်ချိတ်ဆက်ဖို့လိုပါကသင်၏အိပ်မက်အလုပ်အဖွဲ့အစည်းနှင့်လူဦးလိုက်နာပါ။ လူမှုကွန်ယက်အတွင်းကသင်သည်လည်းလုပ်နိုင် WhatsApp ကိုအဖွဲ့များအပေါ်မန်နေဂျာငှားရမ်းရှာတွေ့ Twitter နဲ့ Facebook ပေါ်မှာ။ သင်ပြုပါအခါတိုင်းသင်အလုံအလောက်နေသောသူတို့အားပြသရန်ဖို့ကြိုးစား အသစ်သောအလုပ်အကိုင်အများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်.
ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သကဲ့သို့ပင် စုဆောင်းမှု updates များကို LinkedIn နှင့် Facebook ပေါ်တွင် HR အမှုဆောင်အရာရှိအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အမကြာခဏထိုကဲ့သို့သော LinkedIn ကဲ့သို့သောလူမှုရေးလိုင်းများကိုကျော်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်းမှတဆင့်ထုတ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိသည်။ ဤနည်းသွားအနှစ်ချုပ်ရန်သင့်အားအသိအမှတ်ပြုရန်ပထမဦးဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်တို့အားသေချာနိုင် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအတွက်လက်ရှိအခွင့်အလမ်းများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျနော်တို့သင်သိရ စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများကိုလည်း CV ကိုများအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများတောင်းဆို ဆိုရှယ်မီဒီယာကျော်နှင့်အလွန်မကြာခဏဖြစ်ပျက်သော။
သင့်ရဲ့ Upload လုပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှနောက်ဆုံးရေးသားချိန် CV ကို။ ကျနော်တို့၏ CV ကိုခံရလိမ့်မည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်များဒူဘိုင်းဖြစ်စဉ်တွင်စုဆောင်းမှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအလုပ်အကိုင်အတွက်စုဆောင်းဘို့5က start အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီပြီးသား 150,000 ထက်ပိုမိုထားရှိ မွမ်ဘိုင်းကနေအလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေသူ။ ထို့အပွငျဥရောပနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီရန်။
ယေဘုယျအားဖြင့်မှီ, စကားပြော ယူအေအီးအတွက်ကောင်းသောအလုပ်ကိုသင်ရှာတွေ့ သငျသညျအထဲကကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါတယ် မည်သည့်အလုပ်။ သင်ဘဏ္ဍာရေးဘတ်ဂျက်တိုးမြှင့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာထိုကဲ့သို့သောဆောက်လုပ်ရေးအဆောက်အဦးအဖြစ်မိမိဆန္ဒအလျောက်စီမံကိန်းများတွင်သင်၏လက်ညစ်ပတ်ရဖို့မရှက်ရှိနေသည်။ ဒီမျိုး MBA ဘွဲ့ရနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ သူတို့သာဖြစ်ခြင်းအချိန်များမှာအစဉ်အမြဲကြာရှည်မပေးပါ။ သူတို့အခွအေနမြေိုးသင်တို့သည်လည်းတစ်ဦးမေတ္တာကမ်ပိန်းရန်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံအားပူဇော်နိုင်ပါတယ် ရုံဘောလုံးကိုနာရီအကြာတွင်သင်တန်းဒူဘိုင်းအတွက်ကိုလှိမ့်ရ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူကူညီပေးနေကြပါသည်ကတည်းကအချို့သောအကြီးအတှေ့အကွုံမြားရရှိနှင့်ရှာတှေ့နိုငျ အရောင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ်လာမယ့်အလုပ်.
သင်တစ်ဦးရောင်းအားအလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ်ယူအေအီးအတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်။ အတူဥပမာ, ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူအသိပညာနှင့်ခိုင်ခံ့သောဆက်သွယ်မှုများကိုတည်ဆောက်ခြင်း, ဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက် ဒူဘိုင်းအတွက်တောင်အာဖရိကကျွမ်းကျင်သူများ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်ကျိုးနပ်သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုခုနှစ်တွင်အသစ်တစ်ခုကိုလယ်ဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းမှဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်တက်ကြွစွာထား အသစ်ကအော်တိုဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်များအတွက်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်အတွင်းစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေအတွက်စေ့စပ်ထိုအတောအတွင်းအမှန်တကယ်တစ်ဦးခြားနားအောင်လုပ်ပေးသင့်တယ်။ အခါတိုင်းကျိန်းသေအကြောင်းရင်းအဘို့သင်၏အသက်တာအတွက်အပြုသဘောတိုးတက်မှု / သက်ရောက်မှုအောင် ထို့အပြင်သင်၏အသက်တာအတွေ့အကြုံအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကဒူဘိုင်းအလုပ်ရလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်နှငျ့သငျတို့ကစတင်ပါလိမ့်မယ် ယူအေအီးနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျ၌အကြှနျုပျတို့၏ဒေတာဘေ့စတစ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုအပ်လုတ်.
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ဆောင်းပါးကိုယ်တော်သည်အမြဲတည်ဖို့လိုအပ်သမျှကိုအဖုံးကိုအလိုရှိ၏။ အထူးသဖြင့်သင်ကဲ့သို့ အကောင်းမြင်အလုပ်ရှာဖွေသူ ဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏အလုပ်ရှာဖွေရေးတလျှောက်လုံး။ ကျွန်ုပ်တို့သွားရောက်လည်ပတ်ကျေးဇူးပြုပြီးအဆုံးသတ်ခင်မှာ ဒူဘိုင်း Whatsapp အုပ်စုတစ်စု link ကို။ ဤရွေ့ကားနည်းလမ်းတွေသင်စုဆောင်းမှုမန်နေဂျာနှင့်အတူချိတ်ဆက်အလွယ်တကူနိုင်ပါတယ် အမ်းမရိတ်၌ထား.
သငျသညျလုပျနိုငျနောက်ထပ်စမတ်ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပါသည် တစ်ဦးဘဏ်လုပ်ငန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေ။ ဤနည်းကိုသင်လျင်မြန်စွာဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ နှင့်အခြားသောလက်ပေါ်, ဒီသင်ရုံဒူဘိုင်း၌ဆင်းသက်လျှင်ထဲကနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေါ့ အိန္ဒိယအလုပ်အကိုင်ရှာတှေ့နိုငျ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။ သင်တို့အပေါ်မှာရှာဖွေနိုင်ပါတယ် google နှင့် LinkedIn အဘယ်သူသည်လက်ရှိတွင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာစုဆောင်းနေပါတယ်။ လူကြိုက်အများဆုံးအလုပ်ဆိုဒ်များများမှာ GulfTalent နှင့် Bayt.com နှင့် ဒူဘိုင်းအတွက် Naukri ပင်လယ်ကွေ့အလုပ် site ကို.
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်သွားရောက်သစ်ကိုကျွမ်းကျင်သူများအကြံပေး ဂျယ်ရီ Varghese အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Careers အလုပ် site ကို။ ဒီကုမ္ပဏီအားဖြင့်သင်တို့ကိုအိန္ဒိယကနေဒူဘိုင်းမှနေရာချနိုင်ပါတယ်လို့ပဲ။ နှင့်သင်တန်း၏, သူတို့ဖြစ်ကြသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာမြင့်မားသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိခြင်း။ ဒါ့အပြင်ပါကစ္စတန်လုပ်သားများယူအေအီးမှပါကစ္စတန်ထံမှထွက်ရွှေ့ဖို့ဒီစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီအသုံးပြုနေသည်။
ငါတို့သည်ငါတို့၏ဆောင်းပါးအဆုံးသတ်ခင်မှာငါတို့သည်လည်းဖော်ပြထားခြင်းချင်ပါတယ် ဒူဘိုင်းဟိုတယ်အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဒူဘိုင်းအတွက်ယခုအချိန်တွင်, ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းသူ 40 ထောင်ပေါင်းများစွာအသစ်သောဟိုတယ်များထက်ပိုရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ထဲကတချို့က မြေတပြင်လုံး GCC နိုင်ငံများတွင်ရှာဖွေနေ ထိုကဲ့သို့သောကာတာနိုင်ငံနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျအဖြစ်။ ဒါကြောင့်အဘို့အသွားနှင့်ဟိုတယ်အတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့မှတကယ်ကျိုးနပ်သည်။ ကြီးမားတဲ့စျေးကွက်လည်းရှိပါတယ် Philipino ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်.
သင်သည်တတ်နိုင်ရဲ့ဒီအပိုငျး၌ရင်ဆိုင်ရပါစို့ စော်ဘွားအတွက်အသက်တာသစ်သို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်ရ။ သင်သည်တတ်နိုင်သကဲ့သို့သင်တို့လိုအပ်သမျှအဖြစ်အများအပြားကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျလညျးအကြှနျုပျတို့၏ကတခြားဆောင်းပါးများကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ် ဒူဘိုင်းမှာဘလော့ဂ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုပေါ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များလက်ခံရရှိရန်အပိုင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site မှစ. ငါတို့သည်ဖြစ်သည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူဆန္ဒရှိ ယူအေအီး၌သူ၏အိပ်မက်အလုပ်အကိုင်များအတွက်နေရာချ.
သင်ကရှာတွေ့စေချင်ပါနဲ့ ဒူဘိုင်းယောဘ? ဤစကားမှန်ပေမည်ဖြစ်သော်လည်းကျနော်တို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သငျသညျကိုစတင်ရန် အဆိုပါတစ်ဦးအသက်တာသစ် ယူအေအီး! ကဒူဘိုင်းအတွက်အသက်ရှင်ရန်အန္တရာယ်ကင်းသောကွောငျ့.